LinkedIn Campaign Manager Inosunungura Yayo Nyowani Yemushandirapamwe Yekuzivisa Chiitiko | Martech Zone
LinkedIn Campaign Manager Inoburitsa Yayo Nyowani Yemushandirapamwe Yekuzivisa Chiitiko
China, July 26, 2018 Muvhuro, July 23, 2018 Douglas Karr
LinkedIn inozivisa chiitiko chakagadzirwazve chekuzivisa LinkedIn Campaign Manager, zvichiita kuti zvive nyore kunzwisisa kuti mishandirapamwe yako iri kuita sei. Iyo nyowani nyowani inopa yakachena uye inonzwisisika chiitiko iyo inoita kuti iwe zvive nyore kubata uye kugadzirisa ako makwikwi.
LinkedIn Campaign Maneja Ekuvandudza Anosanganisira:
Sevha nguva mukuzivisa mushandirapamwe - Nechiitiko chitsva ichi chekuzivisa, unogona kukurumidza kuona kuti mishandirapamwe yako irikuita sei uye woita zvigadziriso zvepamusoro-soro kuti uvandudze mhedzisiro. Dhata muMushandirapamwe Manager ikozvino inotakura makumi maviri muzana nekukurumidza, ichikubvumidza iwe kuti utarise data zvakanyanya - kunyangwe kana uine mazana emakampeni uye zvigadzirwa zvekushambadzira. Zvakare, chimiro chitsva cheNAB chinokutendera kuti uchinje kubva kumaaccounts kuenda kumishandirapamwe kuenda kushambadziro mumawiri clicks. Isu takagadzirisazve kugona kwekutsvaga, saka zvinongotora masekonzi mashoma kubvunza mishandirapamwe nemazita emushandirapamwe, ID yemushandirapamwe, fomati yekushambadzira uye nezvimwe.
Nzwisisa mushandirapamwe uye gadziridza mune imwe flash - Kana kushambadza kwako kusiri kumhanya mushe, iwe unofanirwa kutora matanho nekukurumidza kuti unyatso kugadzirisa. Ndosaka takawedzera zvinhu zvitsva kuti zvikubatsire kuita sarudzo dzemushandirapamwe nekukurumidza kupfuura nakare kose. Iyo nyowani yekuzivisa chiitiko ine 1-bhatani kuputsika ichikupa iwe yakadzama nzwisiso muzvakakosha zviratidzo senge zviitiko zvekushandurwa uye kuiswa kune iyo LinkedIn Audience Network.
Gadzirisa ruzivo rwako rwekuzivisa - Iwe unogona ikozvino sarudza uye sarudza mametriki ekuona aunoitira hanya nawo zvakanyanya, kunyangwe iri Performance, Shanduko kana Vhidhiyo.
Sekureva kweLinkedIn, uku kuburitswa inongova danho rekutanga muchirongwa cheyakareba chigadzirwa.
Vhura iyo LinkedIn Ad
Tags: linkedin ad advertisinglinkedin adslinkedin advertisinglinkedin mushandirapamwe maneja
Maitiro Ekudzoreredza Vashandisi Kubva paNzvimbo Yavo muWordPress